Vatokely calligraphic 100 maimaim-poana | Ao amin'ny Creativos Online ihany Famoronana an-tserasera
Vector Calligraphic Exclusive 100 maimaim-poana
Vaovao tsara no entinay anio. Ireo namanay avy Freepik, tranonkala iray tena feno an'ny loharanom-bola maimaim-poana ho an'ny mpamorona, dia nanapa-kevitra ny hanome anao fonosana Vondron-kodiarana calligraphic manokana izay tsy haparitaka amin'ny tranokala hafa.
Ary ny fonosana resahintsika dia misy, tsy misy hafa ary tsy latsa-danja amin'izany Vatokely 100. Mety ampiasaina ho mpanasaraka eo anelanelan'ny andianteny, raha te hanan-javatra bebe kokoa amin'ny sehatry ny literatiorao ianao, na hametahana maromaro ary hamadika azy ireo ho zana-kazo baroque ao amin'ny faritra misy anao, manao karazana bokotra. Ary, mazava ho azy, azonao atao koa ny mampiasa azy ireo amin'ireo infografika akaiky ny sehatry ny tantara an-tsary, mba hametrahana azy ireo. Tohizo ny famakiana ary azonao atao ny misintona maimaimpoana ireo sary avo lenta ireo.
Calligraphic Vector Pack
Manana kinovan'ny .jpg (vector mainty amin'ny fotsy fotsy) ary kinovan'ny .svg, endrika vector izay ambany kokoa noho ny .ai na .eps Azonao atao ny manokatra ny .svg amin'ny Adobe Illustrator ary, raha mbola tianao ny mampakatra azy amin'ny endrika malaza indrindra dia azonao atao ny mamaha izany amin'ny alàlan'ny File> Save as (ary eo no fidianao ny endrika mety indrindra aminao).
Saingy tsy tokony tsy jerenao ilay goavambe mety ho fisie .svg, ankehitriny HTML5 no kaody mpanjaka. Ny SVG dia tsy midika zavatra hafa ankoatry ny Scalable Vector Graphics: eny, io dia manondro izay eritreretinao. Ity sary iray ity ihany dia afaka manolotra habe isan-karazany mandritra ny tranokalanay, nefa tsy manary kalitao kely, amin'ny alàlan'ny famaritana azy ao anaty kaody fotsiny. Ary fantatrao ve hoe inona no mbola tsara indrindra? Izay manavesatra haingana kokoa noho ny sary mahazatra.
Ny zava-mitranga dia mbola manomboka ekena ny mety an'ity endrika ity, ary amin'izao fotoana izao dia tsy karazan-drakitra azo vakina, ohatra, ny fitetezana ny rafitra Android (ary ireo mpitety tranonkala hafa tsy nohavaozina amin'ny kinova farany ). Saingy tsy azoko antoka fa, ao anatin'ny fotoana fohy, hanamoran'izy ireo ny fametrahana ireo karazana sary ireo amin'ny tranokalanay.
Mandritra izany fotoana izany dia tadidio fa hatramin'ny Freepik Izy ireo dia nanao fonosana vatan-kazo miavaka 100 ho anao, mpamaky Creativos Online. SATRIA manana loka ny fanarahana anay. Sintomy eto.
Ireo vatan-tsarimihetsika 100 an'ny fonosana omen'i Freepik antsika
Loharano - Freepik
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » dia midika hoe » Cartoon vector » Vector Calligraphic Exclusive 100 maimaim-poana
Tsara! Misaotra betsaka!
12+ Fianarana maimaimpoana ho an'ny volavolanao